Ntụfu mkpụcha oge mbịarambịa maka ndị China na ndị na-eweta ya | Yoho
Oge mkpofu oge maka ụmụ nwanyị
N'ogbe ndi mmadu, edere ka igwe eji ebipu mmiri,
Pos nwere ike ịnwe ọzụzụ Dog na-azụ ụmụaka
Eco-Friendly 100% biodegradable sanitary pads organism ...
Womenmụ nwanyị Na-ahụ Nleta Ahụhụ Sanitary Napkins Period Pa ...
1, Topsheet: akwa a na-eteghị acha, 2, igbe azụ: akwa mkpuchi mmiri na-enweghị mmiri dị ka ihe nkiri na-enweghị mbipụta, 3,460mm ogologo nke Core: akwa na-enweghị akwa + 11g fluff pulp + 9g SAP + White ADL, 4, 2cm nke na-eche nche n'ime ime , Ogo 5,360 wide elastic waistband
Ibepu ahihia oge eji egbo ocha
Nwatakịrị Oge Mgbasa Mpempe Akwụkwọ maka mkpụmkpụ mkpụmkpụ, dị mfe iyi ma dị mfe mmiri.
nkenke anyi nwere ike eyi ya n’abali n’enweghi mmiri ọ bula, gaa juputara n’uju na ọbara n’ara n’elu akwa ma obu nke dabara adaba.
mgbochi mmiri na iku ume
SAMUELU EGO NA-EGO EGO, KWURU ANYA
Uru gbasara Panties anyị
360 ogo ukwu band
yi ya dika ezigbo nkenke n’enweghi obi iru ala
dị mfe iyi, mfe adọwa
20cm +/- 2cm obosara ka mgbochi leak
Onweghi onye na-ahụ maka ngwa na-ahụ anya
Enweghị ọgwụgwọ Ọgwụ
Na-ehi ụra na oge anụ ụtọ anyị,
nwere ike idobe ala ịta ahịhịa abalị
Njem azụmahịa ma ọ bụ njem n’enweghi oghere iji gbanwee
1> Ekwela nkwa gi na nchedo gi kachasi nma
2> Ihe onwunwe na - amịkọrọ ozugbo, na - eme ka ị kpọọ nkụ ma chebe ya pụọ ​​na oghere ọnya iji nwee ike ịga ụbọchị gị, echegbu onwe gị
3> sticdị dabara adaba na-eji nwayọ nwayọ, nwee uche dị mma n’okpuru uwe na-agbanwe iji bie gị, n’adịghị ka akwa akwụkwọ ọgụgụ buru ibu
4> Enweghi obi iru ala ma obu akwa ime n’azu, ugbu a n’inyi ocha mara mma nke nwere ihe imeputa umu nwanyi ato, na SureFit nke ukwu maka odi nma, uwe ime dika odi nma.
5> Kwado ngwaahịa nwegasịrị afọ ojuju mgbe niile na igbe nwere uche; FSA tozuru oke na US; Nkwakọ ngwaahịa nwere ike ịdị iche na foto e gosiri
Jiangxi Yoho Technology Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ ọkachamara guzobere na 2018, ọ dị na Jiujiang City, Jiangxi Province, ọ bụ nke dị n'ebe ugwu nke World Geopark a ma ama - Lushan Mountain.Jiujiang City bụkwa nrutu nke Yangtze Osimiri, Poyang Ọdọ Mmiri Lake na Beijing-Kowloon, nke nwere ezigbo ọnọdụ, yabụ ụgbọ njem a na-adaba adaba na ngwa ngwa.
Yoho dị iche na nyocha na mmepe, imepụta, ịzụ ahịa ngwaahịa adịghị ọcha, dịka uwe ogologo ọkpa, uwe ogologo ọkpa, akwa nhicha akwa, akwa akwa ụmụaka, akwa ahụike ụmụaka na ihe ndị ọzọ.Ọzọ ọkụkụ a na-ekpuchi mpaghara 70000m2 site na itinye ego dị nde $ 44.We anyị nwere akụrụngwa dị elu, njikwa sayensị .Anyị na arụkọ ọrụ na 3M, Weyerhaeuser, Sumitomo Seika wdg, anyị na-ebuli nkọwa na-enweghị nsogbu. Anyị nwere olile anya na anyị nwere ike inye ndị mmadụ nlekọta ahụike kachasị mma na nke kachasị mma maka mmadụ niile. ụwa niile.
Site na nkà ihe ọmụma azụmaahịa “teknụzụ na-akwalite okike, ọrụ na-eme ka uru bara uru”, ụlọ ọrụ anyị ji nke nta nke nta. Anyị na-atụ anya iwulite mmekọrịta na ndị mmekọ azụmahịa anyị ogologo mmeri.
Ajụjụ: you nwere ụlọ ọrụ azụmahịa ma ọ bụ onye nrụpụta?
A: Anyị bụ ndị ISO & CE & SGS gbaara ama ama nke maara ọrụ na akwa ndị okenye na ọrụ Menstrual ogologo ọkpa OEM & ODM dị.
Ajụjụ: Ogologo oge ole bụ na oge nnyefe gị?
A: Ọ bụ ihe dị ka ụbọchị iri anọ na anọ mbụ enyerela aka mgbe ị bịanye aka na kọntaktị ahụ ma nweta nkwanye ego ahụ.n’ime nke abụọ, oge nnyefe ruru ụbọchị iri atọ.
Ajụjụ: Gịnị bụ ịkwụ ụgwọ?
A: 30% bụ maka itinye ego, 70% bụ nguzozi megide nnomi B / L ma ọ bụ 100% LC n'anya.
Ajụjụ: you nwere ike izipu nlele n'efu?
A: Ee, enwere ike izipu sampleto n'efu, naanị ị ga - akwụ ụgwọ ego awara awara.
Ajụjụ: Ebee ka ị na-emepụta ngwaahịa ndị a?
A: Ihe bụ isi akụrụngwa sitere na United States, yana Japan. Adreesị ụlọ ọrụ dị na Jiujiang City, Jiangxi Province na-emepụta ngwaahịa niile na ebe nkuzi na-enweghị uzuzu.
Ajụjụ: Ebee ka ọdụ ụgbọ mmiri FOB dị?
A: Ọtụtụ mgbe ọdụ ụgbọ mmiri ọpụpụ bụ Jiujiang Port.
Nke gara aga: 2020 jiri mkpocha mgbochi kpochapụ ihu atọ
Osote: Hotsale Comfortable Coloured Disposable Underpad maka Elder na Pet
wearlọ uwe mgbaka ụlọ ọgwụ diski adịghị
hypoallergenic incontinence uwe ime
Incontinence Nchebe Na-echilata Mkpokọta
incontinence uwe ime
edo edo adịghị ọcha
disontinence uwe ime ụlọ
uwe ime ahụ na-adịghị agbanwe agbanwe
Nlekere anya uwe ime
ọkụ ịkwa ahụ
Women Menstrual Sanitary Napkins
oge ụmụ nwanyị nwere ike ịhapụ uwe ogologo ọkpa
UMU IGBO EGO
2020 ọkụ ịre ọkụ mgbanwe oge uwe ogologo ọkpa ụmụ nwanyị na-enwe…
Na-ere ahịa 2020 dị mma dị mma ahaziri ahazi ..